वीरगँजमा फेरी विस्फोट !
लगातार विस्फोटका कारण उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण, २०७६ | २३:०७:००
तस्विर : मनिष पौडेल ज्यू
न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । प्रदेश नं. २ को पर्सा जिल्लाको वीरगँजमा आज फेरी विस्फोट भएको छ । हालाकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले यसलाई पटाखा विस्फोट भएको बताएका छन् ।
वीरगँज महानगरपालिकाको तरकारी बजारमा बेलुकी करिब पौने ८ बजेतर्फ बम विस्फोट भएको स्थानीयहरुले बताएपनि प्रहरीले भने यसलाई अझै पटाखा फुटाएको बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार बेलुकी विस्फोट हुँदा दुई जना घाईते भएको छ । उनीहरुको अवस्था भने समान्य रहेको जनाइएको छ
बीरगँजको मूल चौक घण्टाघरदेखि उत्तर तर्फ रहेको तरकारी बजारीमा विस्फोट भएको र विस्फोटमा परी दुई जना घाईते भएको जनाइएको छ । घाईते हुनेहरुमा बाराको परवानीपुर वडा नं. ५ बस्ने अमरजीत पटेल सहित नाम नखुलेको एक जना अन्य घाईते भएका हुन् । विस्फोट भएपछि चर्को आवाजका कारण तरकारी बजारमा भागदौड मच्चिएको थियो । यसअघि वीरगँजकै बिरता बजारमा केही गत साता मात्र बम विस्फोट भएको थियो जसमा १ जना भारतीय नागरिक सहित ३ जना घाईते भएका थिए ।
लगातार विस्फोटका कारण उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ । चरणवद्ध रुपमा केही दिनकै अन्तरालमा विस्फोट भएपछि स्थानीयहरु त्रसित भएको छ । हालाकी, प्रहरीले भने पटाखा मात्र पडकेको र त्यसकै बारुद्धले गर्दा एक जना समान्य घाईते भएको दाबी गरेका छन् । विस्फोट भएको जनाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डिएसपी एवम् प्रहरी प्रवक्ता अनन्त राम शर्माले विस्फोट गराउनेको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।